वाणिज्य बैंक भन्दा विकास बैंक सक्षम ? - Aathikbazarnews.com वाणिज्य बैंक भन्दा विकास बैंक सक्षम ? -
मनोज ज्ञवाली । पछिल्लो समय विकास बैंकहरुमा तरलता अभाव छैन । तर वाणिज्य बैंक, बैंकहरुमा चर्को तलरता अभाव भएको देखिएको छ । पछिल्लो सयम विकास बैंक, वाणिज्य बैक भन्दा सक्षम भएका छन् ।
विकास बैंकको खास उद्देश्य भनेको प्रतिस्पर्धाको आधारमा देश विकासमा टेवा पूर्याउने हो । विकास बैंकहरु पनि कुनै चिजमा असक्षम छैनन् । हिजो वाणिज्य बैंकहरु पनि दुई अर्ब पुँजीमा नै चलेका थिए । तीन वर्ष पहिलेका वाणिज्य बैंकभन्दा अहिलेका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु धेरै कुरामा सक्षम छन् । त्यसकारण, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने विकास बैंककहरुको अपेक्षा छ ।
विकास बैंकहरुलाई एकातर्फ विजनेश ग्रोथको समस्या छ भने अर्कोतर्फ इम्प्लोइज टर्न ओभरको समस्या छ । विकास बैकहरु पुँजीका हिसाबले ठूला भइसकेका छन् । तर, सोही अनुरुप विजनेस नबढ्दा तरलता अभावको समस्या देखिएको छ । निक्षेपको वृद्धिदर वार्षिक १८÷२० प्रतिशत हुँदा विकास बैंकको कर्जाको वृद्धिदर ६०÷७० प्रतिशत अपेक्षा गरिएको छ । पहिले वाणिज्य बैंकसँग कारोबार गर्न नसक्ने ग्राहकहरु विकास बैंकमा आउने स्थिती थियो । तर, अहिले विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुले तानिरहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अवस्था सहज रहेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु डिपोजिटको माकेर्टिङ भन्दा कर्जाको मार्के्टिङमा लागि परिरहेका छन् । बैंकहरुको डिपोजिटको रेट हेर्दा घटाउँदै ल्याइएको छ । बचतमा १० प्रतिशत साढे १० प्रतिशतसम्म व्याज दिने वाणिज्य बैंकहरु हाल ३÷४ प्रतिशत व्याज दिईरहेका छन् । विकास बैंकहरुले पनि व्याज घटाएर नै दिएको अवस्था छ । त्यसकारण, लामो समयको लागि त भन्न सकिँदैन, तर अहिले तरलता अभावको अवस्था सहज भएको छ । अधिकांश बैंकहरु कुल संकलित निक्षेपको १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्थामा छन् । (ज्योति विकास बैंकका सीइओ मनोज ज्ञवालीको कुराकानीमा तयार पारिएको लेख)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव निर्धारित मितिमा नहुने
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकको मर्जरलाई राष्ट्र बैंकको एलओआई